𝗪𝗵𝗮𝘁 𝗶𝘀 “𝗘𝗾𝘂𝗶𝘁𝘆”?
“𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 = 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 + 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦” ဆိုပြီး Accounting Equation ရှိပါတယ်။ Equity ဆိုတာ Financial Statement တွေဖြစ်ကြတဲ့ Balance Sheet ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Period တစ်ခုစာ စာရင်းချုပ်ပြီးကြတဲ့အခါ ပေးရန်ရှိတဲ့အကြွေးတွေကို ပေးပြီး Company Shareholder တွေကို ပြန်ပေးရမယ့် ငွေ Amount ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ Private Company တွေမှာဆိုရင်တော့ Owner တွေရဲ့ Equity ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာပြောရရင် လူတစ်ယောက်မှာ $6,000 ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ သူက $ 9,000 တန် ကားတစ်စီးကိုဝယ်ယူဖို့ $3,000 ကို ပိုက်ဆံချေးပြီးဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Asset ကားတန်ဖိုးက $ 9,000 ၊ တကယ်တမ်း ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Equity က $6,000၊ Liabilities (အကြွေးပေးရန်ရှိ) က $3,000 လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း 𝗖𝗵𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝘁 (𝗖𝗙𝗔) 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 ဟာ Investment Finance ကို အထူးပြုထားတဲ့ Curriculum ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ Curriculum ကို Investment ပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ Financial Instruments တွေအကြောင်းကို Focus လုပ်ပြီး တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ Equity Investments တွေ၊ Fixed Income၊ Alternative Investments တွေနဲ့ ဒီ Securities တွေကို ဘယ်လို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုလုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့ Portfolio Management တွေအစရှိတဲ့ Curriculum တွေနဲ့ အနှစ်ရှိတဲ့ Finance ပညာရပ်ကို ထဲထဲဝင်ဝင် လိုက်စားနိုင်မယ့် ဘာသာရပ်တစ်ခုပါ။
ဒီ Post ထဲမှာတော့ CFA Curriculum ထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Equity Investment အကြောင်းနဲ့ သူ့ရဲ့ Valuation Methods တွေအကြောင်းကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အစကနဦးအနေနဲ့ CFA Curriculum ထဲမှာ Equity ကို ဘာလို့ထည့်သင်ရတာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကို စပြောချင်ပါတယ်။ Equity ကို Analysis လုပ်တဲ့နေရာမှာ အကြောင်းရင်း(၂)မျိုးရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ External ကလူတွေအနေနဲ့ တခြား Company က Share တွေကို ဝယ်ယူမယ့်အချိန်မှာ Stock Exchange ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ Company ရဲ့ Stock Share ပေါက်ဈေး (Price) နဲ့ သူ့ရဲ့တကယ်တမ်းရှိတဲ့ Equity တန်ဖိုး (Value) နဲ့ ကိုက်ညီရဲ့လားဆိုတာကို စဉ်းစားရပါမယ်။ နောက်အကြောင်းရင်းတစ်မျိုးကတော့ Company တစ်ခုလုံးကို ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် Equity တန်ဖိုးသာမကတော့ဘဲ Company တစ်ခုလုံးရဲ့ Asset တန်ဖိုးတွေ၊ ပေးရန်ရှိအကြွေးတွေ၊ အစရှိသဖြင့် Multiplier ပေါင်းများစွာကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအတွက်လဲ Equity အကြောင်းကို လေ့လာဖို့အတွက် Topic တစ်ခုအနေနဲ့ ထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
CFA Level I မှာဆိုရင် Equity ကို Session (၂)ခုအနေနဲ့ သင်ကြားရပါမယ်။
၁. 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 𝑶𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏, 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙𝒆𝒔, 𝒂𝒏𝒅 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 𝑬𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒚
Session (1) မှာတော့ FINANCIAL MARKET ထဲမှာ ရှိတဲ့ Securities တွေ၊ Primary Security Markets တွေ၊ Secondary Security Markets တွေအကြောင်း၊ Market Indexes တွေအကြောင်း၊ Market Efficiencyအကြောင်း နဲ့ တခြား Related ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ထည့်ထားပါတယ်။
၂. 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝑨𝒏𝒂𝒍𝒚𝒔𝒊𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏
Session (2) မှာတော့ Equity Analysis နဲ့ Valuation Methods တွေအကြောင်း လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Valuation Methods တွေထဲမှာမှ Methods (၃) ခုကို သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁) 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁 𝗩𝗮𝗹𝘂𝗲 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹: 𝗗𝗶𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝗱 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹
ကုမ္ပဏီ ရဲ့ Shareholder တွေရရှိမယ့် Dividend ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ တွက်ထုတ်ထားတဲ့ Model ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ Stock Share တွေကို Stock Exchange ပေါ်ကနေ ဝယ်တော့မယ့်အချိန်မျိုးမှာ ဒီ ကုမ္ပဏီရဲ့ Equity တန်ဖိုးဟာ သူရောင်းထားတာနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိရဲ့လားတန်ရဲ့လား သိဖို့အတွက် တွက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ သုံးပါတယ်။
(၂) 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗲𝗱 𝗖𝗮𝘀𝗵 𝗙𝗹𝗼𝘄 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹 (𝗗𝗖𝗙)
ကုမ္ပဏီ ရဲ့ငွေအဝင်အထွက် Cash Flow ပေါ်ကို အခြေခံပြီးတော့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ Model ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ကုမ္ပဏီ ရဲ့ Future Value ပေါ်မူတည်ပြီး Investment Value ရဲ့ လက်ရှိပေါက်ဈေးကို တွက်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Investors တွေအတွက်ရော၊ ကုမ္ပဏီ ရဲ့ Owner တွေအတွက်ပါ မိမိရဲ့ Business ကို တန်ဖိုးသတ်မှတ်ရာမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ Asset အသစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရာမှာဖြစ်ဖြစ် Financial Investments တွေ တွက်ဖို့လို့တယ်ဆိုရင် သုံးပါတယ်။
(၃) 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶𝗽𝗹𝗶𝗲𝗿 𝗠𝗼𝗱𝗲𝗹
Share Price ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ Multiples တွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတွက်ချက်ရတဲ့ Model ဖြစ်ပါတယ်။ Financial Statements မှာပါဝင်တဲ့ Revenues, Earnings, Cash Flows, သို့မဟုတ် Book Value အစရှိတဲ့ Multiples တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ တန်ဖိုးတွေကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာတဲ့အချိန်မှာသုံးပါတယ်။
(၄) 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘁-𝗕𝗮𝘀𝗲𝗱 𝗩𝗮𝗹𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻
Asset Based ဆိုတဲ့အတိုင်း Asset ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Preferred Share နဲ့ Liabilities တွေကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး တွက်ထုတ်ရတဲ့ Model ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်က ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးကို ပြန်ဝယ်မယ့်အချိန်မှာ (ဒါမှမဟုတ်) လုပ်ငန်းက အမြတ်အစွန်းမရှိဘဲ ထုခွဲရောင်းချရမယ့်နေရာတွေမှာ သုံးပါတယ်။
ဒီအပေါ်က Valuation Techniques တွေဟာ တစ်ခုကောင်းအနေနဲ့ အသုံးမပြုဘဲ Analysts ​တွေ တန်ဖိုး သတ်မှတ်တဲ့ အခါမှာ ပေါင်းစပ်ပြီး နှိုင်းယှဉ် အသုံးပြုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Valuation Techniques ​တွေက Science သဘော Mathematical Formulas ​တွေပေါင်းစပ်တာဖြစ်ပေမယ့် တကယ့် တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်း ကတော့ Art Form တစ်မျိုးလို့ယူဆနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းရဲ့ Financial Numbers ​တွေထဲမှာမပါတဲ့ အခြားအကြောင်းများစွာကို လေ့လာပြီး မှ ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။